Midina An-dalambe Ny Vahoaka Ao Borkina Faso Hiadiana Amin’ny “Filoha Mandra-pahafaty” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2014 19:32 GMT
Sary vongan'ny Filoha Compaoré nazeran'ireo mpanao fihetsiketsehana tany Bobo Dioulasso, Borkina Faso- avy amin'i Edem Tchakou (nahazoana alàlana)
Nahozongozon'ny hetsi-panoherana i Ouagadougou, renivohitr'i Borkina Faso, sy ireo tanàn-dehibe hafa hatramin'ny tapaky ny volana Oktobra, taorian'ilay sosokevitry ny Filoha Blaise Compaoré ny amin'ny handinihana indray ny fe-potoana iasan'ny filoham-pirenena any Afrika Andrefana.
Fe-potoana roa ihany no azon'ny filoha iray iasàna araka ny lalàm-panorenana amin'izao fotoana izao. Nefa efa in-telo novàna io lalàm-panorenana io — tamin'ny 1997, 2000 ary 2002 — hatramin'ny nandaniana azy tamin'ny 1991. Namela an'i Compaoré hijanona teo amin'ny fitondrana nandritra ny 27 taona ireo fanovàna ireo.
Ilay sosokevitra fanitsiana, izay nokasaina holaniana amin'ny alàlan'ny fitsapankevibahoaka amin'ny herinandro ho avy izao dia mikatsaka ny hampihena ho 5 taona ilay fe-potoam-piasana 7 taona amin'izao fotoana. Hamerina indray ny fanisana ho aotra (araka ny fomba fiteny) io sosokevitra io ary hamela azy hitondra in-telo indray, raha lany izy, ka hiampy 15 taona indray ny maha-filoha azy.
An'aliny ireo olona nanao diabe nanerana ny renivohitra ny 28 Oktobra, nihira ho an'ny fiovàna, tanatin'ny filaminana tamin'ny ankapobeny. Na izany aza anefa, nisy mpanao fihetsiketsehana vitsivitsy nanjera ny sary vongan'ny filoha teo afovoan'i Bobo Dioulasso ary dia nanipy baomba mandatsa-dranomaso tany amin'ireo mpanao fihetsiketsehana tao Ouagadougou ny mpitandro filaminana.
Iray amin'ireo mpitarika nikarakara ny hetsika ny lehiben'ny mpanohitra, Zephirin Diabre. Nibitsika antso ho an'ny vahoaka mba hiaraka hanao diabe izy ny 26 Oktobra :
Hanomboka amin'ny fivoriana amin'ny 8 ora maraina eo amin'ny “Place de la Nation” ny hetsika ny 28 Oktobra #Ouagadougou
Avy eo dia nampiany ny antony nieritreretany fa fotoana izao handraisan'ny mponina andraikitra:
TSIA ho an'ny fanodinkodinana ny Lalàm-panorenana. Mila mandà mandra-pahafaty io hevitry ny filoha io isika. Tsy maintsy tsipahantsika ny fanodinkodinana ny lalàm-panorenana !
Voarakitra midadasika be sy narahina tao amin'ny Twitter tamin'ny alalan'ireo tenifototra #burkina, #bf226 ary #iwili ireo fihetsiketsehana. Nizara sary vitsivitsy i Mossi Dramame, avy any an-drenivohitra :
Ry vahoakan'i Borkina, manohana anareo i Afrika. Mialà i Compaoré ! #Burkina
Inty misy sarin'ilay fivoriana tamin'ny Talata maraina:
Hipoka olona ny “Place de la Révolution” tany #Burkina Faso #iwili cc @papalioune @paddoff
Na dia azon-dry zareo aza ny anton'ireo hetsi-panoherana dia tsy azon'ireo Borkinabe sasany antoka fa ny fikomiana no làlana marina hahatongavana amin'izany. Taterin'i Yaya Boudani ny sasany amin'ireo fomba fijery ireo avy any Ouagadougou:
Tokony hifidy ireo làlana ara-dalàna isika amin'ny famahàna io olana eo amin'ny mpanohitra sy ny mpitondra io. Tsy misy làlana hafa ankoatra io afa-tsy ny làlana tsy ara-dalàna izay mampiady ny andaniny sy ny ankilany. Ho tafiditra anaty krizy izay tsy ho voafehin'iza na iza isika.
Mandinika am-pitaintainana ity fivoarana vaovao any Borkina Faso ity ireo mpanara-maso any amin'ireo firenena manodidina. Nanana anjara asa goavana ny Filoha Compaoré tamin'ny fanelanelanany nandritra ny krizy Ivôriana tamin'ny 2010. Torian'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny Novambra 2010, niaina krizim-pitondrana lavareny i Côte d'Ivoire taorian'ny fitakian'ireo mpifaninana roa, Laurent Gbagbo sy i Alassane Ouattara, ny fandreseny. Nanamarika ny fotoana hatramin'ny fiandohan'ilay olana saro-bahàna ireo hetsi-panoherana sy ireo herisetra mihoa-pefy, satria samy tsy nisy nilefitra na i Gbagbo na i Ouattara. Nitarika hery mpanelanelana i Compaoré hampijanonana ny herisetra.
Nanadihady ilay hetsi-panoherana ny mpikambana iray ao amin'ny governemanta Ivôriana, Alain Lobognon, avy amin'ny alalan'ny fahan'ny Twitter-ny:
Ireo tanjony no mamaritra ny toeram-pianarana politika rehetra. Miavaka ara-demôkratika i Shina. Maninona no tsy mba ho tahaka izany i Borkina Faso?
Matahotra ny mety hiakaran'ny herisetra ireo mpanara-maso. Asehon'ireo tatitra ao amin'ny “News Ouaga” fa nanjary adihevitra be ireo hetsika ny herinandro talohan'io:
Taorian'ireo fihetsiketsehina somary am-pilaminana tamin'ny herinandro lasa tany Ouagadougou iny dia nisy vondron'olona “50” ka hatramin'ny 300″ “nanafika” solombavambahoaka teo anoloan'ny tranon'izy ireo hatramin'ny Alahady. Nampangainy ho mpanao “kolikoly”, sy “mpamadika firenena” ry zareo.